Maitiro ekugadzira yekubika blog mumatanho matatu | ThermoRecipes
Maitiro ekugadzira yekubika blog mumatanho matatu
Unoda here gadzira rako rekubika blog uye iwe hauzive sei? Zvakanaka saka usazvidya moyo, muThermorecetas tiri kuzokubatsira iwe kugadzira blog yekubika yekubika kubva ku0 uye mukati 3 matanho akareruka izvo zvinowanikwa kune wese munhu kunyangwe vasina ruzivo rwemberi nezveInternet kana tekinoroji.
Chinhu chekutanga chaunoda kuseta yekubika blog ndeye sarudza dura raunoda kushandisa. Iyo domeini ichave yako mufananidzo uye nyowani padandemutande saka ipfungwa yakakosha chaizvo uye zvakakodzera kushandisa imwe nguva kusarudza yakanaka, nekuti gare gare iwe unogona kuichinja asi iro ibasa rakaomarara uye kuti zvichazodiwa nyanzvi kuti ikubatsire.
Kusarudza dura rakanaka rebhurogu rako kiyi
Mamwe matipi ekusarudza yakanaka domain kune yako blog:
Sarudza zita iri nyore kurangarira, zvinoreva chimwe chinhu. Semuenzaniso, kana zita rako riri Sara chingave chinhu chakadai lasrecetasdesara.com kana zvakafanana.
Edza kugadzira domeini kupfupika sezvinobvira sezvo izvi zvichaita kuti zvive nyore kuyeuka.
Lkana kujekesa sezvinobvira. Kana bhurogu yako iri yekubika mabikirwo, saka zita rezita rinofanirwa kujekesa kune chero anorava kuti iri blog yekubheka.
Sanganisira mazwi akakosha mukati me domain. Kana bhurogi rako riri pamusoro pemadhiri zvino edza kuisa izwi rekuti "dessert" mukati medura rako, senge todosmypostres.com kana zvakafanana.
Shandisa iyo .com, sezvo iri iyo inonyanya kushandiswa pasi rese. Chete muchiitiko chekugadzira webhusaiti chete kuSpain ndipo iwe paunogona kusarudza yekuwedzera .es asi usamboshandisa zvisingawanzo zviwedzero kana kuwedzeredzwa kubva kune dzimwe nyika.
Kana tangova nezita rakasarudzwa, rinotevera danho rinenge riri nyoresa muzita rako. Pano kurudziro yedu ndeyekushandisa Godaddy, sezvo iri imwe yemapuratifomu ayo mutengo wakanakisa wekupa uye nezvose zvivimbiso. Kunyoresa yako domain iwe unongofanira tinya pano, isa zita rawasarudza (tanga watarisa kuti haripo here, nekuti kana riripo uchafanira kutsvaga rimwe zita) wobhadhara.
Zvakare ikozvino une chipo chakakosha nei uchigona tenga .com domain ye chete € 0,85 nekudzvanya apa
Matanho ekutenga duraini
Mune anotevera screenshots isu tichaona nhanho nhanho yekutenga duraini pane Godaddy chikuva.
Matanho 1 uye 2
Pinda iyo godaddy webhusaiti, nyora zita rezita uye tinya pane bhatani rekutsvaga kuti uone kana dura racho riripo kana kuti kwete.
Kana dura racho riripo saka iwe une mhanza. Zvino tinya pane bhatani rekusarudza.
Dzvanya bhatani enderera kungoro kuenderera nekutenga.
Nhanho 5 ne6
indica huwandu hwemakore iwe unoda kutenga iyo domain (tinokurudzira angangoita makore maviri) uye wobva wadzvanya pa "enderera mberi nekubhadhara". Kubva pano iwe unongofanirwa kunyoresa pawebhu uye iwe unozokwanisa kubhadhara nyore kuburikidza nekiredhiti kadhi kana paypal.
Uye ndizvozvo. Zvino chii unotova nechinzvimbo yatengwa tichaenda kuona danho rinotevera: kuitisa.
Sarudza yakanaka yekutambira
Kana tangova nedomeini, rinotevera danho rinenge riri tenga yakanaka yekugamuchira. Mune ino kesi kurudziro yedu ndeye kushandisa masevhisi e Raiola Networks unova mupi wechiSpanish uyo unopa sevhisi yemhando yepamusoro pamutengo wakanaka uye ne100% rutsigiro muchiSpanish. Kuti uwane iyo Raiola webhusaiti uye kuhaya yakanakisa kuitisa tinya apa. Iwe une yakanaka yekutambira kubva ku € 2,95 pamwedzi!
Matanho ekutenga kuitisa
Kufanana nekutenga duraini, isu ticha tsanangura nhanho nhanho nzira yekutenga yakanaka yekugamuchira.
Nhanho 1 ne2
Pinda iyo Raiola webhusaiti uye tora pane menyu Kubata> WordPress Kubata.
Sarudza iyo yekubata chirongwa chinokodzera zvakanyanya zvaunoda. Pano kurudziro yedu iri tenga chirongwa che € 6,95 pamwedzi yekuve nesimba rakakura pamutengo unonzwisisika.
Nhanho 4, 5 uye 6
Nyora zita renzvimbo yawakambotenga kune yako webhusaiti. Pane poindi 5 unofanirwa kuratidza kuti iwe unoda kuisa WordPress (zvinokurudzirwa kuti ugare uchiisa yazvino vhezheni) uye sedanho rekupedzisira iwe unofanirwa kungobaya bhatani Gadzira iyo odha. Kubva pano iwe unongofanirwa kupedzisa kunyoreswa semutengi mutsva uye ndizvozvo.
Kamwe pano, isu tatotenga iyo domeini uye iyo yekutambira.
Isa maneja wemukati
Kamwe panguva ino, danho rinotevera raizove gadza maneja wezvemukati kukwanisa kutsikisa mabikirwo pane yako blog. Pano hapana kupokana, yakanakisa kurudziro iri WordPress, chishandiso chinogadzirisa akawanda mablog epasirese uyezve chiri icho chatinoshandisa kuThermorecetas (Cherekedza: WordPress inogona kuiswa otomatiki mune yekubata yekutenga nhanho, asi kungoti tikazokuudza maitiro ekuzviita gare gare).
Kuisa WordPress pane yako nyowani yekugamuchira haudi chero ruzivo rwehunyanzvi. Raiola ane chishandiso chakaiswa nekusarudzika chinokutendera iwe gadza WordPress ne 4 nyore kwazvo kudzvanya. Kana iwe uchida kuona kuti ungazviita sei, heino vhidhiyo inotsanangura iyo yese danho nhanho nhanho.
Gadzira yako blog
Zvakanaka, isu tine blog yako yoda kugadzirira. Zvino iwe unongoda chete tora dhizaini iyo yaunoda uye zvese zvichapedziswa. Kana tichitsvaga dhizaini tine sarudzo mbiri:
Shandisa dhizaina yemahara: WordPress ine mazana emahara magadzirirwo aunogona kuisa nyore pane yako blog uye wotanga kuishandisa. Izita rayo rehunyanzvi ndiwo madingindira uye iwe unogona kuona iyo yakazara catalog kupinda peji ino.
Shandisa dhizaini dhizaini: Iyi ndiyo ichave yakakurudzirwa sarudzo kubvira kwemadhora anodarika makumi mana tinogona kuve neanogadzira chaiwo mablog edu. Tevere ini ndave kuzokuratidza zvimwe.
WP Dingindira remabikirwo
Iyo inyanzvi dhizaini uye zvakakwana yakagadzirirwa mablog blog. Unogona kurodhaunirodha $ 48 clicking here.
Chikafu & Recipe WordPress Dingindira
Imwe dhizaini yakagadzirirwa kunyanya yekubika mablog. Chii chimwe inoenderana zvakakwana kune zvinofamba uye mapiritsi saka bhurogi rako rinotaridzika rakanaka pane chero mhando yechigadzirwa. Inodhura chete $ 48 uye unogona kuitenga nekudzvanya apa.
Paunenge iwe wasvika pano, iwe une yako blog yakagadzirira uye iwe unongofanirwa kutanga kutsikisa ekutanga mabikirwo.
Pano tave kuzokupa iwe mashoma ekunyengedza kuti ubudirire newebhusaiti yako nyowani.
Nzira yekumisikidza yakabudirira kicheni blog?
Tora yakabudirira recipe blog!
Mifananidzo yakakosha pane yekubika blog. Izvo hazvina basa kana recipe yako yakanaka kana iyo pikicha inoenda nayo isiri yemhando. Iwe unozofanirwa kutora mapikicha anokwezva uye kune izvi pane mamwe matipi anobatsira senge kushandisa yekusarerekera kumashure (zvimwe chena), mahwendefa echitsva dhizaini uye ayo anopa akakosha kubata. Ehezve, gara uchiyeuka kuti mabikirwo anofanirwa kuve protagonist yemufananidzo.
Wedzera watermark ine zita reblog yako kumifananidzo. Izvi zvinobatsira vaverengi vako kuyeuka webhusaiti yako uye panguva imwechete kudzivirira mamwe mawebhusaiti kuti asashandise iwo pasina mvumo yako.
Tevera a maitiro akafanana kutora mifananidzo yese (saizi dzakafanana, dzakasiyana mavara, nezvimwewo) kuitira kuti vashandisi vako vazive maitiro ako.
isa imwe pikicha yedhishi rapera pakutanga kweresipi. Zvino kana iwe uchida iwe unogona kuisa zvemukati mapikicha nematanho epakati ekutevera, asi yekutanga foto iyo muverengi anogara achiona inofanirwa kunge iri yeakapedza recipe.
Ipa yako unobata wega kune iyo yekubheka. PaInternet pane zviuru zvemarepeke saka kuti usiyane iwe uchafanirwa kuwedzera kukosha kune vaverengi vako. Ipa kwako kwakasarudzika kubata kune yega yega dhishi uye iwe unowana yakavimbika vateereri iyo inoverengera iwe mazuva ese.
Shandisa a inzwi rekuvhara. Vaverengi vako ishamwari dzako, taura navo sekunge vaive shamwari dzeupenyu hwese nepedyo uye inodziya toni. Vanozvikoshesa zvechokwadi!
Uye ndizvozvo! Zvino isu tinogona chete dai iwe rombo rakanaka nebhurogu yako nyowani uye dai iwe ukawana kubudirira kwakawanda.